Ukuphupha uLerche Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-lark yintaka edlulayo eyaziwa ngengoma yayo emnandi. I-lark iyamangalisa yinto yokuba ihlala inyuka iye phezulu emoyeni icule. Le ntaka inendawo eqinileyo kuncwadi: Iimbongi ezinkulu ezifana no-Aesop, uChristian Fürchtegott Gellert, kunye noGotthold Ephraim Lessing abenza lark kwiintsomi zabo.
KuShakespeare, "ungumvakalisi wosuku" ogqiba ubusuku boRomeo noJuliet. Umfanekiso wentshontsho lentaka yakudala ide isetyenziswe nakwinzululwazi: abantu abakhetha ukulala kade ngabohlobo lwesikhova, abo sele beqaqambile kwaye bechwayitile phambi kokuntwela kokusa babelwe iintlobo ze-lark.
I-trigger yokuvela kwe-lark ephupheni ingaba yinto ekhuthazayo yokwenene. Abaphuphi baya kuyonwabela ukumamela le ngoma. Inokukukhumbuza ukuba lixesha lokuba uvuke. Ukutolikwa kwamaphupha, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ezona meko zikufutshane zephupha: Kwenzeka ntoni kanye kanye kwi-lark kwaye liphupha lihambelana njani nalo?
1 Uphawu lwephupha «iLark» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iLark» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iLark» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iLark» - Ukutolikwa ngokubanzi
Ukunyikima okuphezulu kwesimboli yephupha «Lark» ekhatshwa yingoma ifumaneka kutoliko lwephupha uhleko oluhle kwaye uye phambili ebomini. Njenge lark, i-reverie inesishwankathelo esihle sezinto ezingezantsi kwayo ukusuka kumgama kwindawo ephezulu. Izinto zoxinzelelo kunye neengxaki zikude kwaye zincinci ephupheni. Ukuhlekisa okuhle kunegalelo kwinkqubela phambili yobungcali kunye neyabucala: i-lark ephaphazelayo, ekuchazeni amaphupha, luphawu lokufezekiswa kweenjongo ezinqwenelekayo.
I-lark nayo ingaba ngumqondiso wephupha lokukhathala kwentwasahlobo kwaye ngenxa yoko. ukuzonwabisa Kuya kufuneka uziphathe kwaye ugcwalise umculo, iingoma kunye nemidlalo. Ekuchazeni iphupha, ukubona i-lark ephupheni ithi kuyathandeka. Amava othando qhubeka. Ingoma yelark, xa iviwe ephupheni, ithembisa ikamva elonwabisayo eligcwele impumelelo kunye nempilo.
Ukuba iphupha libukele i-lark ngelixa usitya, oku kuthathwa njengophawu lwesivuno esityebileyo. Ukuba intaka yengoma ibhabha ngolonwabo ephupheni, le yokugqibela inokuba nethemba lokuba iyaphila. Suerte siza Kubane.
Ukubona i-lark xa ibaleka kukubonakalisa isidima ekuchazeni iphupha. iinjongoIphupha liza kuphumelela, nangona kunjalo, ke zama ukungazicingeli kwaye wenze uvelwano ngakumbi komnye umntu.
Xa intaka ephuphayo iwela emhlabeni ngelixa icula, luphawu lokudideka ngokweemvakalelo kunye nokungonwabi. Ngentaka eyenzakeleyo okanye efileyo ephupheni, nikezela Usizi y Tod phakathi. Ukuba iphupha libamba i-lark emgibeni, ukunyoluka kubonakaliswa kwisimboli sephupha, kubangele ukuba izicwangciso zingaphumeleli. Ukuxhelwa kwesilwanyana sisenzo esingumfuziselo ekutolikeni amaphupha: iphupha likulungele ukwenzakalisa abantu abamsulwa.
Uphawu lwephupha «iLark» - ukutolikwa kwengqondo
I-lark ngumqondiso wephupha ekuchazeni amaphupha. Ukukhathazeka y Libertad. Ukukwazi kweentaka ukubhabha bekusoloko kunomdla ebantwini kangangokuba siyathanda ukuphupha sikwazi ukwenza oko nathi.
Ukubhabha liphupha lamandulo lomntu elihambelana kakhulu neemfuno zengqondo. Njengesidalwa esibhabhayo, ilark luphawu lwethu. Intsingiseloapho kugcinwa khona iingcinga kunye neenkxalabo zobomi bemihla ngemihla.
Uphawu lwephupha luquka umphefumlo: Inkululeko, ebonakaliswa ngokubhabha, iba liphupha kwinkululeko yeengcinga neemvakalelo zokuphupha. Njenge lark, amaphupha angoyisa amaxhala emihla ngemihla kwaye uwagwebe ngokwenyani ukude. Ingoma yentaka yasimahla ebhabha luphawu lokuphupha lokuchazwa kwephupha. Ingqondo eseleyo yokuphupha.
Uphawu lwephupha «iLark» - ukutolika kokomoya
I-lark ikukuchazwa kwamaphupha njengophawu lwephupha lokugqitha kwe Mundane kunye Gabe yengoma.
Ukongeza, ifanekisela ukunyanzelwa komzimba. ukhulule umphefumlo ngaphambi kokuzalwa nasemva kokuzalwa ukufa lomntu.